Ngaphantsi kwesiqingatha somxholo kwi-Apple Podcast ineziqendu ezili-10 nangaphezulu | Ndisuka mac
Iqonga le-podcast lika-Apple yenye yeyokuqala, ukuba ayingowokuqala ukubetha emarikeni. Nangona kunjalo, I-Apple ayihlawulanga ngqwalaselo iyimfuneko kwaye namhlanje idlula ngokubanzi ngamanye amaqonga amaninzi akutshanje. Ngethamsanqa, iApple ayilibalanga ngokupheleleyo kwaye kwiinyanga ezimbalwa bayikhumbule kwakhona ukuba banokwazisa umxholo okhoyo kwiApple TV +.
Ngokwabafo kwi-amplifi, iqonga le-podcast ngoku linayo ngaphezulu kwe-2 yezigidi zeenkquboNangona kunjalo, uninzi lwazo, iipesenti ezingama-26, lupapashe isiqendu esinye kuphela, ke inani lezigidi ezi-2 kufuneka lithathwe ngqolowa yetyuwa.
Ukuba siqhubeka nokwaphula amanani, siyabona ukuba i-44% yeepodcast ziyafumaneka kwiApple podcast, upapashe iziqendu ezi-3 okanye ezimbalwa, ngenxa yoko abanakubizwa ngokuba yipodcast, ukuba sibiza uthotho lweziqendu ezi-4 nangaphezulu podcast. Ngaloo ndlela. Ukuba sisusa zonke ezo podcast, elona nani leepodcast lifumaneka kweli qonga ziipodcast ezingama-800.000.
Inani leepodcast ezinikezela ngeziqendu ezilishumi okanye nangaphezulu ngama-36%, zibeka amanani 720.000 iinkqubo. Le ngxelo iphakamisa ukuba isiqephu esinye seepodcast sinyusa iqonga, njengoko kuvavanyo lomsebenzisi olungahambanga phambili, ngenxa yoko akufuneki baqhubeke nokubakho.
Ngokufanelekileyo, ngokukaJames Cridland wePodnews.net, uninzi lwee-podcast ezinesiqendu esinye zivela kwi-Anchor, Spotify, Spreaker kunye neHeart, ababoneleli basimahla ababambisa iipodcasters ezintsha ezisazama ulingelo oluphakathi.
I-Amplifi iphakamisa ukuba indlela yokukhupha isenzo esisodwa inyusa inani lezigidi ezi-2 ilingana nokubandakanya iinkqubo zikamabonwakude ezivelise umqhubi wenqwelomoya kodwa khange babe luthotho kuluhlu lwexesha lonke lomabonwakude.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngaphantsi kwesiqingatha somxholo kwi-Apple Podcast ineziqendu ezili-10 okanye nangaphezulu